Alshabab oo shaacisay Magaca Sarkaal ay toogasho ku dishay Magaalada Muqdisho | Somalia News
Pep Guardiola Oo Xaqiijiyay Xiddig Ka Dhaawacmay Kooxdiisa Kulankii West Ham.
Tabababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay dhaawac soo gaadhay xiddiga weerarka uga ciyaara kooxdiisa ee Sergio Aguero kulankii ay kooxdiisu bar-baraha la gashay kooxda West Ham. Guardiola ayaa xaqiijiyay in uu dhaawac Muruqa ah soo gaadhay xiddigiisa Sergio Aguero intii uu socday kulankii ay City bar-baraha la gashay West Ham. Warkan ayaa a mid u xun kooxda Man City marka loo eego in uu Aguero xiddig laf dhabar ah u yahay kooxda uu hogaamiyo tababare Pep Guardiola. Dhaawaca Aguero ayaa imanaya kadib markii uu xiddigu dhawaan ka soo kacay dhaawac uu muddo dheer ugaga maqnaa kooxda Man City.
Alshabab oo shaacisay Magaca Sarkaal ay toogasho ku dishay Magaalada Muqdisho
Alshabaab ayaa shaaisay in weerar qorsheyan ay maleeshiyadeeda ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada degaanka Dowlada Hoose ee Muqdisho.
Sarkaalkan oo shalay galabtii la sheegay in lagu dilay gudaha Suuqa Bakaaraha ayaa ka tirsanaa cidamada canshuuraha ee Minishiibiyada, waxayna Alshabaab Alshabaab ku sheegtay Cabdi Macow Kulmiye, waxaana gooba ka baxsaday dableydii dilkiisa geysaay.
Sarkaalkan ayaa la sheegay inuu ciidamadaa Canshuurta ka ururiya goobaha ganacsiga Suuqa weyn ee Bakaaraha, mana jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Alshabaab ayaa sii wada dilalka qorsheysan ee ay ka fuliyaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale xilli ay sii kordhiyeen miinooyinka la hago ee lala beegsado gadiidka ciidamada.
Previous articleZahra Naaleeye: Soomaalida ayaa farta lagu fiiqaa, waxaa la leeyahay Soomaaliya ama Kenya yey gabdhaha geeyaan
Next articleGuddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo sheegay in Doorashada Ay Waqtigeeda Ku Dhaceyso